Abakhiqizi nabahlinzeki be-Molecular Biology - China Ifektri Yezinto Eziphilayo Ezisebenzisekayo
Onke amapuleti akhiqizwa esikhungweni sokuhlanza se-LIFAN ukuqinisekisa ikhwalithi yebanga lamangqamuzana. Uhla lwethu olubanzi lwamapuleti e-polypropylene lunikeza izixazululo ezinhle kakhulu zokulondolozwa kwesampula nokusethwa kwe-assay, okuvumela ama-dilution nama-aliquots ukuthi aphathwe, agcinwe noma athuthwe kalula. Onke amapuleti ayifomethi ye-ANSI yokuhambisana nezinhlelo ezizenzakalelayo.
Amathiphu we-Robotic we-Agilent
I-LIFAN Robotic Tip yakhelwe ngonjiniyela abanolwazi, futhi yenziwa ebangeni elihlanzekile lemvelo elingamakamelo ayi-100,000, izinqubo ngezinto zokwenziwa kwe-premium. Ngaphambi kokulethwa kumakhasimende ethu, yonke imikhiqizo itholakala ngenqubo eqinile ye-QC eqinisekiswe yi-ISO 9001, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO13485, ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. Siqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ayinayo i-DNase / RNase, futhi ayiyona i-pyrogenic yokuhlangabezana nezinga eliphakeme kakhulu lokuhlolwa kwaselebhu nokuxilongwa kwemitholampilo.
Amathiphu we-LIFAN Robotic akhiqizwa kusuka ku-Polypropylene ephezulu ecacile. Ubuso bamathiphu bukhishwa ngenqubo ekhethekile. Le nqubo yenza indawo yangaphakathi yethiphu ibe yi-hydrophobic, ngakho-ke inciphisa kakhulu ukulahleka kwesampula futhi inikeze ukukhiqiza okuphezulu kakhulu lapho usebenza nabezindaba ezibucayi.
I-LIFAN inikeza izixazululo eziphelele ze-OEM zamathiphu wezinhlelo ezahlukahlukene zokuzenzekelayo. Amathiphu wokuzenzakalela enziwa ngemininingwane eqinile ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwenqubo futhi ahlanganiswe nge-automation ukuqinisekisa ukusebenza nekhwalithi ehambisanayo.
Amathiphu weRobotic kaHamilton
Amathiphu we-Robotic we-Tecan (Teken)
Amathiphu we-pipette wokugcina ophansi
Pigama lomkhiqizo: Amathiphu we-pipette wokugcina ophansi / amathiphu wokuncipha okuphansi
Amathiphu we-LIFAN wokugcina okuphansi we-pipette akhiqizwa kusuka ku-Polypropylene ephezulu ecacile. Ubuso bamathiphu bukhishwa ngenqubo ekhethekile. Le nqubo yenza indawo yangaphakathi yethiphu ibe yi-super hydrophobic, ngakho-ke inciphisa kakhulu ukulahleka kwesampula futhi inikeze ukukhiqiza okuphezulu kakhulu lapho usebenza nabezindaba ezibucayi.
Igama lomkhiqizo: Universal Pipette Tips
Amathiphu we-LIFAN Universal Pipette akhiqizwa kusuka ku-Polypropylene ephezulu ecacile. Amapayipi ama-Pipette Micro ayimikhiqizo esezingeni eliphezulu engasetshenziswa ye-micropipettor.
Ifilimu le-PCR ulwelwesi / i-PCR
I-PCR ulwelwesi lwe-96/384 PCR plate, umuthi wepuleti we-PCR ulwelwesi lwe-96/384 PCR plate, ipuleti le-muti kahle, amacansi acacile we-100 esikhwameni ngasinye, izikhwama ezi-5 icala ngalinye Isici: * Okuqukethwe: Ikhwalithi ephezulu ye-PET plastic * Ukusetshenziswa: Kusetshenziselwe ukhunta, amagciwane kanye namasiko amancane. * Ingafakwa ukuze kulondolozwe isikhala futhi ilungele indawo yebhodi. * Ukuhambisana okuhle, okujwayelwe iningi lemishini. * EO oyinyumba noma oyinyumba * Kupakishwe ngokufaka uphawu esikhwameni sephepha leplastiki noma esikhwameni seplastiki ukuvimbela ukungcoliswa. * Availa ...
96 kahle 200ipuleti le-ul pcr
384 ipuleti le-40ul kahle
Imikhiqizo ye-PCR yenziwe, kusuka ku-prime virgin, polypropylenes. Lokhu kubangela amashubhu, imichilo kanye, namathiphu akhombisa ukulingana okuphelele phakathi kokusobala, ukuthamba, ukuqina, izici zokulwa nokuqina kwegesi.
Ama-Vozs aqandayo angukhetho lwakho oluhle ngokusekwe kukhwalithi ephezulu nezici ezikhethekile. * Kwenziwe nge-PP eqinile ne-PE * Kutholakala ngemiqulu emi-4: 0.5ml, 1.5ml, 2.0ml no-5.0ml * Ukuhlanganiswa kwekepisi kuqinisekisa ukulingana okuqondile futhi ngeke kumunce amanzi noma okunye ukungcola * Ingxenye yethubhu inenqubo yokuhlola ebunjiwe yesikali yokurekhoda kalula * Ukuvalwa okuqukethe i-silicone gasket kungagwema ukuvuza oketshezi * Isikulufa sekepisi sokusebenza kwesandla esisodwa * Ibanga lokushisa: -196 ℃ -121 ℃ * Kulula ...